Iyo "hissgate" inogona kunge iri iyo yekukanganisa fekitori yeiyo iPhone 7 uye 7 Plus | IPhone nhau
Izvo zvave kuve zvakajairika, pamberi pega kwega kuvhurwa kweiyo nyowani iPhone, kuita "mufaro" kuyedza kufungidzira kuti chii icho suo, kukanganisa kwefekitori, uko kwaizouya gore iro. Tese tichayeuka iyo enderera mberi kana the bendgate, zvese zviri kukonzera nyonganyonga pasi rese. Kunyange chiri chokwadi kuti mamodheru egore rino anoita kunge asina chero zvikanganiso zvakajeka, Vamwe vashandisi vari kutaura kuti vanonzwa kuridza muridzo pa iPhone yavo kana iri mumamiriro ezvinhu anoda kuita kwakanyanya.
Izvi, izvo vamwe vakatobhabhatidza se hissgate inogona kutora chimiro sekutadza kukuru kwefekitori yemhando dzegore rino, mazuva matatu chete mushure mekuburitswa munyika dzekutanga dzakasarudzwa nekambani kutengesa aya mamodheru.
Zvisinei, hapana chikonzero chekuvhunduka. Sezvo isu takakwanisa kuongorora kuburikidza nemablog sezvakaita Iyo Verge, Engadget o iMore, Zvakare uye nekwavanobva ivo, hapana kana matemu avanayo, edu kana emumwe munhu wavanoziva anotambura nedambudziko iri. Izvi zvinoreva kuti Izvi hazvingangoita kunge iko kukanganisa kunokanganisa matemu mazhinji, asi zvikanganiso zvakasarudzika zvakajairika mukugadzirwa kwemidziyo mizhinji. Chinokonzera hiss hachina kujeka, kunyange hazvo zvese zvichiratidza kuti chingave chinhu cheiyo nyowani A10 processor. Hapana chakakomba, shure kwezvose.
Ehe saizvozvo, Kana iwe uri mumwe weavo vakanganiswa, usazeze kutaura nekambani technical technical kuti uwane wekutsiva nekukurumidza sezvazvinogona. Kunyangwe homwe yacho ichiita senge yakaganhurirwa mumazuva ekutanga aya, kunyanya mune mamwe mamodheru, ruzha urwu hachisi chinhu chinokanganisa mashandiro eiyo terminal, saka haufanire kunetseka zvakanyanya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Dzimwe iPhone 7 uye 7 Plus dzinogona "hiss" mune mamwe mamiriro
Ruzha irworwo rwunotambura neangu iphone 7 plus uye kutaura nehunyanzvi sevhisi iyi ndiyo mhinduro yavanondipa:
Pataive tichikurukura panguva yedu yekutaura, ini ndanga ndichiferefeta nyaya yako uye ndikaona kuti mainjiniya edu eIOS ari kuunganidza ruzivo nezve ruzha urwu pane iyo iPhone. system uye Hardware. Parizvino, Apple inofunga izvi seyakajairika kurira, uye hatisi kupa zvinotsiva, asi ndiri kuvimbisa kuti ini ndichakupa ruzivo rwese rwandinopihwa nemainjiniya edu.
Saka ndinogara sezvandiri, ndichaenda kuchitoro chemaapuro kuti ndione kana iyo iPhone 7 plus yavanayo semuenzaniso inganzwewo ruzha irworwo.
Ini ndinogadziridza info: iyo iPhone 7 yavanayo semuenzaniso muchitoro chemaapuro inoitawo ruzha irworwo. saka ndakumbira kudzoserwa mari yangu: / ndichafanirwa kumirira 7s
Robert Bast akadaro
Ini pachangu, ini handigutsikane neruzha kupfuura chero chinhu nekuti ini ndakaita bvunzo dzekuita nezvose antutu gfx bhenji uye geekbench 4 uye mashandiro eiyo iphone 7 anoderera pese pandinomhanya bhenji rimwe nerimwe zvakare, ndinofunga zviri nekuda kweizvozvo kurira pamwe processor nyaya yekupa muenzaniso mune antutu bhenji haina kumhanya neangu iphone kudzamara yagadziridzwa kuita 10.0.2 uye haina kuziva data rese inongoti unknow mudziyo uye inopa mamaki ezvakawanda kana zvishoma pasi pe130,000 kunyangwe yakaderera pane iphone 6s
Pindura kuna Robert Bast
Kubvisa uyu mutsara wakakodzera kuve mune fanboy anthology:
«Chinokonzera hiss hachina kujeka, kunyange hazvo zvese zvichiratidza kuti chingave chinhu cheiyo nyowani A10 processor. Hapana chakakomba, shure kwezvose.
Kuti moyo we mobile unotadza hauna kunyanya kusimba ... Chero bedzi isina kukwikwidzwa uye kuitwa runako, hongu.
Hissgate zvirokwazvo ichokwadi. Tarisa zvakaitika kwandiri http://www.vooucher.com/es/opinion-iphone-7-plus-apple/
Tweetbot 4 inogadziridzwa nerutsigiro rweIOS 10 uye nedzimwe nhau